Muju dia toeram-pialamboly malaza malaza fantatra fa tsy any Korea ihany, fa manerana izao tontolo izao, na dia kely aza. Ny lalana sy ny fotodrafitrasa rehetra manodidina azy dia naorina tamin'ny taona 1990 raha nanomboka ny fitomboana ara-toekarena tany Korea Atsimo , ary nisy boom manangona. Muju dia miorina tsara any amin'ireo tendrombohitra atsimon'i Togusan ao amin'ny faritanin'i Chollapuk-Do, ao amin'ny valam-pirenena , noho izany dia mahaliana fa tsy amin'ny ririnina, fa amin'ny faran'ny vanim-potoana ihany koa.
Tendrombohitra amoron-tendrombohitra any Muju any Korea Atsimo
Ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny toeran'ny Muju - amin'ny tsy fanamarihana ho an'i Korea Atsimo sy ny fomba fanao. Ireo mpamorona an'io toeram-pitsangatsanganana io dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ireo toerana ambany indrindra any Austrona tamin'ny tranon'izy ireo, trano fandroana kanto, fiaramanidina fiaramanidina matihanina ary fahazavana mahazatra mba hahafahan'izy ireo mitaingina hatramin'ny alina be.
Làlana ao amin'ny toeram-ponenana 19:
Ny 3 amin'izy ireo dia natao hanomboka amin'ny fanatanjahan-tena tanteraka amin'ity fanatanjahantena ity;
10 - ho an'ny fiomanana amin'ny ambaratonga;
Ny ambiny dia ho an'ny matihanina izay hankasitraka ny kalitao sy ny faharetan'ny fisakafoanana.
Ny anaran'ireo làlambe dia niseho koa ho fanomezam-boninahitra an'i Aostralia mozika miaraka amin'ireo mpihira marobe. Indray andro ianao dia afaka mandeha any amin'ny Andante, Waltz, Polka, Allegro ary na dia Mozart aza. Ny lalana malaza indrindra amin'ny Muju dia ny Silk Road, izay mihoatra ny 6 km ny lavany.
Ho an'ireo ankizy sy olon-dehibe izay tsy mahafantatra ny fomba fanaovana ski na snowboard, dia misy sekolin-ski, antokon'olom-bolo maro anisan'ireo Austrian avy amin'ny Astronomie Snow Sports Academy. Faly izy ireo ny mampita ny traikefa an-dalamby mankany amin'ireo mpirotsaka an-tsehatra, mampianatra ireo fototra sy manampy amin'ny famolavolana lalana be pitsiny.
Fialam-boly ho an'ny ankizy ao Muju
Ankizy, reraky ny skis sy ny boards, dia hahita izay tokony hatao any amin'ny hantsan'ny Muju. Eto, ny fialamboly sledge dia malaza ho an'ny sokajin-taona rehetra. Misy sary maromaro miavaka manokana ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ho an'ny tanora taona dia misy havoana malemy kokoa, ny ambiny dia ho liana amin'ny faharoa, henjana kokoa.
Ny sedraina eto dia ho an'ny olon-dehibe $ 10 ary ho an'ny ankizy $ 8.8, ny fotoana dia tsy voafetra. Ny fandaminana dia arahin-tsokosoko, satria ny fandriam-pahalemana dia mijery akaiky. Ny mpanafika dia mivoaka avy hatrany hanomboka amin'ny olona 8 ary amin'ny havoana ambony sy ambany, dia ny fihetseham-pon'ny zaza sy ny olon-dehibe ihany no re ihany, ary koa ny fiezahana hifaninana, izay nesorina tao anatin'io sambo io na nihodina haingana. Ny sary rehetra dia afangarona amin'ny harato ary misaraka amin'ny làlana mainty, mba tsy hisahotan'ny ankizy azy ireo.
Sehatra mampiavaka an'i Korea eo akaikin'i Muju
Ankoatra ny skiing, ny toerana sy ny manodidina dia hahita zavatra mahaliana. Raha tsy te hiala ao amin'ny faritanin'i Muju ianao, dia tsidiho ny loharano mafana ao Oncheon, ny rano izay kely lavitra noho ny 40C. Misy ihany koa ny fahafahana hilalao golf amin'ny lalana 18 lavitrisa.
Raha mandray fiara ianao na mampiasa taxi, dia afaka mahita ianao:
Ny fiarovana ny Zhuksansanson. Malaza izany satria teo aloha dia nosoratana firaketana momba ny fanjakan'i Joseon, izay nitondra an'i Korea nanomboka tamin'ny 1392 hatramin'ny 1910.
Mount Chirisan . Io no laharana ambony indrindra ao Korea Atsimo 1915 m ary tsy misy afa-tsy adiny iray isaky ny mandeha fiara, saingy mora hita eny amin'ny tehezana.
Ny Monastera malaza Haein. Eto ianao dia hahita boaty hazo hazo maherin'ny 80.000 izay nosoratan'ireo soutras Bodista. Ny Tempoly avy ao Muju koa dia eo an-dalana iray amin'ny fiara.
Aiza no hiaina ao Muju?
Ny trano fandraisam-bahiny ao Muju dia any an-toerany any Oisteria, trano fonenana vita amin'ny trano samihafa izy ireo. Azonao atao ny miaina ao amin'ny Tyrol 5 kintana, ary amin'ny trano tsotra. Na aiza na aiza, ny vahiny dia manana kitapo mafana, arivoarivo Eraopeana, sakafo matsiro, ary any amin'ny toerana sasany na dia misy sauna sy karaoke aza.
Hotels in Muju:
Tyrol 5 *. Ny hotely malaza sy malaza, vita amin'ny hazo. Misy ny kilasy ambony amin'ny serivisy mifandraika amin'ny trano an-trano-trano kelikely kely.
Family Hotel 4 * Quality hotel amin'ny fomba eoropeana miaraka amin'ny efitrano malalaka sy kamiao ao amin'ny efitrano.
Kookmin Hotel 4 * Misy efatra hafa mendrika, izay hahafahan'izy ireo mandany ny alina any amin'ny faritra manodidina azy, ary amin'ny maraina dia mandeha haingana.
Ny safidy fandraisana habaka sisa tavela dia lavitra lavitra ny fisavana, ary ianao dia tokony hampiasa ny shuttle na ny fiaranao mba hahatongavana any amin'ny làlana.
Aiza no misy sakafo matsiro ao Muju?
Afaka mihinana amin'ny dingana rehetra ianao eo akaikin'ny Muju. Eo am-baravaran'ny alam-pandehanana dia tsy hivarotra fivarotana fivarotana na fivarotana fanatanjahan-tena fotsiny ianao, fa koa misy cafe miaraka amin'ny sakafo nentin-drazana koreanina . Eto ianao dia afaka manamboatra ny kimchi malaza kimchi sy ny volombava matevina amin'ny seza madinika. Ny tokony hatahorana ny sakafo avy any an-toerana dia tsy ilaina izany, ao anatin 'izany lovia avy amin'ny hena, legioma sy ny vokatra hafa mahazatra antsika.
trano fisakafoanana Geumgang sy Han-Ilgwan;
Tsukyu mpamokatra zavamaniry, manandrana manandrana ny sakafo, fa koa ny karazana labiera eo an-toerana, izay vita tsara eto.
Ahoana no ahatongavana any Muju any Korea Atsimo?
Raha mandeha eny amin'ny hantsana ianao, dia tsy maintsy mandeha any Seoul amin'ny alàlan'ny fiaramanidina mandeha matetika ianao. Any Seoul, ianao dia mila bisy fahitalavitra atsimo, izay avy eo dia mandefa ny sidina any atsimon'ny firenena, anisan'izany ny Muju.
Famaranana ho an'ny divay
Kylie Jenner dia nanao fihetsiketsehana tery kely roa volana taorian'ny niterahany
Ny amboaram-peo manan-tsaina indrindra
Kefir avy amin'ny Larissa Dolina
Cannelloni miaraka amin'ny akoho
Karazana fisehoan-javatra amin'ny vanim-potoana
Manao ahoana ny fitafiana ankizivavy?
Afaka mahazo kebab shish ve aho?
Cristina Mendes dia mitarika lesona an-tserasera amin'ny fomba ho an'ny vehivavy matavy
Ny asidra amino tsara indrindra
Melon "Kolhoznitsa" - tombony sy ratsy
Fomba hisafidianana ireo rindrina ao amin'ny efitrano fatoriana - hevitra vaovao hanamboarana trano anatiny
Aloka amin'ny Oktobra - famantarana
Borreliosis - aretin'ny Lyme
Tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fitondrana vohoka: ny antony sy ny vokany